Waa tee kooxda uu Alexis Sanchez ku qasban yahay inuu mushaarkiisa u dhimo si uu ugu biiro? – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Manchester United… (Wax waliba oo aad doonayso inaad ka ogaato kulanka caawa ka dhacaya Stamford Bridge)
Waa tee kooxda uu Alexis Sanchez ku qasban yahay inuu mushaarkiisa u dhimo si uu ugu biiro?
(Milano) 25 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Waddanka Talyaaniga ayaa lagu wadaa in ay heshiis u soo bandhigto laacibka garabka kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez.
Laakiin heshiis ay Inter garoonka San Siro ku keeni karto Sanchez ayaa waxaa ka horreeya in uu xoogaa dhimo mushaarkiisa qaaliga ah ee Isbuucii uu ka qaato Manchester United, taasoo gaaraya 500,000 oo gini oo u dhiganta 644,000 oo dollar.
Wakiillada xiddiga reer Chile ee Sanchez ayaa haatan ka fikiraya in dalabka garoonka San Siro uu ku habboon yahay in mushaarkiisa uu u dhimo, iyadoo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana lagu wado in uu dib u furmo bisha May.
Arsenal oo ugaarsanaysa Andre Gomes